Aqoonyahan Faysal Rooble oo walaac ka muujiyeey xarriga Madaxweynihii hore DDSI (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 29, 2018 8:40 g 0
Aqoonyahan Faysal Cabdi Rooble ayaa ka hadlay maxkamadaynta Madaxweynihii hore ee dawladda Goboleedka Itoobiya oo maanta la soo taagay maxkamad Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, kaas oo loo haysto gaboodfallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo hurinta colaado ku salaysan qoomiyado.
Md. Rooble ayaa wareysi uu siiyey Radio Daljir ku sheegay in Cabdi Muxumed Cumar uusan Somalida ka samaynsan waji iyo abaal hore oo mudaharaadyo loogu sameeyo sidii Qalbidhagax, balse wuxuu walaac ka muujiyey sababta loo maxkamadaynayo Cabdi Muxumed oo kaliya iyadoo ay bannaanka laafyoonayaan madaxdii xukunkii TPLF ee hoggaaminayey xukunkii hore ee Itoobiya iyo qabqablayaashii Oromada ee caadaystay dilka dadka Somalida.
Docda kale Faysal waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan maamulka cusub ee ka dhashay dhulka Soomaalida Itoobiya.
Faysal waxa uu u warramay Axmed Sh. Max’ed “Tallman” oo ku sugan studiyeheenna Daljir Bossaso.